» माछापुच्छ्रे बैंकको सन्तोषजनक वित्तीय विवरण, नाफा १० प्रतिशतले बढ्यो
माछापुच्छ्रे बैंकको सन्तोषजनक वित्तीय विवरण, नाफा १० प्रतिशतले बढ्यो
२०७८ बैशाख १४, मंगलवार ०९:३२
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्ममा माछापुच्छ्रे बैंकले सन्तोषजनक प्रगति गरेको छ । बैंकले अघिल्लो आवको यही अवधिभन्दा १०.६१ प्रतिशत बढी नाफा गरेको हो भने अन्य वित्तीय परिसूचकमा पनि सामान्य सुधार आत्मसाथ गरेको पाइएको छ ।
बैंकले यस अवधिमा १ अर्ब २९ करोड ६ लाख रूपैयाँ खुद मुनाफा गरेको छ । गत आवको चैत मसान्तसम्म बैंकले १ अर्ब १६ करोड ६८ लाख रूपैयाँ नाफा गरेको थियो । अपरिष्कृत वित्तीय विवरण अनुसार बैंकको वितरणयोग्य नाफा १८ करोड ८२ लाखबाट बढेर ८४ करोड ६९ लाख रूपैयाँ पुगेको छ ।
बैंकको खुद ब्याज आम्दानी ३ अर्ब ३ करोडबाट ४.०९ प्रतिशतले बढेर ३ अर्ब १६ करोड पुगेको छ । खुद फि तथा कमिसन आम्दानी पनि १३.६२ प्रतिशतले बढेर ८२ करोड ८८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। बैंकको सञ्चालन मुनाफा १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत आव बैंकको सञ्चालन मुनाफा १ अर्ब ७८ करोड रूपैयाँ मात्र थियो ।
बैंकले हालसम्म १ खर्ब २५ अर्ब ४९ करोड रूपैयाँ निक्षेप परिचालन गरी १ खर्ब १२ अर्ब ५७ करोड रूपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । बैंकको निष्क्रिय कर्जा सामान्य बढेर ०.५१ प्रतिशत पुगेको छ ।
निक्षेप : 125498311
कर्जा : 112574996
खुद ब्याज आम्दानी : 3163189
सञ्चालन मुनाफा : 1944723
खुद मुनाफा : 1290612
वितरणयोग्य मुनाफा : 846909
प्रतिसेयर आम्दानी : Rs. 19.01
नेटवर्थ : Rs. 139.3
कोषको लागत : Rs. 5.1
खराब कर्जा : 0.51 %
आधार ब्याजदर : 7.09 %
स्प्रेड दर : 4.04 %